ShweMinThar: MALA ကြက်အကြွပ်ကြော် - ငါးပေါင်း - ၀က်နားရွက်သုပ်
ကြက်ပေါင်သား - ၉၅၀ ဂရမ်
ရွှေလိပ်ပြာအကြော်မှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၄ ဇွန်း+ စားပွဲဇွန်း ၆ ဇွန်း
ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း + လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
ကြက်သားမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
မာလာဟင်းအနှစ် - စားပွဲဇွန်း ၆ ဇွန်း
သကြား - စားပွဲဇွန်း ၄ ဇွန်း
ခရုဆီ - စားပွဲဇွန်း ၆ ဇွန်း
ပဲငံပြာရည်အကြည် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ - ၂၅ ဂရမ် (ကျေညက်အောင်ထောင်းထားပါ)
ရေ - စားပွဲဇွန်း ၆ ဇွန်း
1. လှီးထားတဲ့ ကြက်သားကို ဆား၊ ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ အကြော်မှုန့် စားပွဲဇွန်း ၄ ဇွန်း၊ ကြက်ဥ ၂လုံး ဖောက်ထည့်ပြီး နယ်ထားပါ။
2. ဆော့စ်ချက်ဖို့အတွက် အိုးအသေးတစ်လုံးထဲကို မာလာဟင်းအနှစ်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ခရုဆီ၊ သကြား၊ ငံပြာရည်၊ အသားမှုန့် ထောင်းထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ရေထည့်ပြီး မွှေပါ။
3. ပြီးလျှင် မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး အပူပေးပါ။ ဆူလာရင် မီးအေးအေးဖြင့် ပျစ်လာသည်အထိ ချက်ပါ။
4. ၄-၅ မိနစ်ခန့်ချက်ပြီးရင် ဆော့စ်ပျစ်သည်နှင့် မီးဖိုပေါ်မှချပါ။
5. ရွှေလိပ်ပြာအကြော်မှုန့်ကို ဗန်းထဲဖြန့်ခင်းပါ။ ပြီးလျှင် ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့်နဲ့ ကြက်သားမှုန့်ထည့်ပြီး မွှေထားပါ။
6. ပြီးလျှင် နှပ်ထားတဲ့ ကြက်သားထည့်ပါ။ ပြီးနောက် မွှေပေးပါ။ မုန့်သားကြွပ်ကြွပ်လေးဖြစ်ဖို့ ရေနဲနဲထည့်ပြီး ကြက်သားနဲ့ အကြော်မှုန့်များများကပ်အောင်နယ်ပါ။
7. နယ်ထားတဲ့ ကြက်သားကို နှစ်ခါခွဲပြီး ကြော်ပါ။ ကြော်တဲ့အခါ မီးအရှိန်မပြင်းပါစေနဲ့ မီးအရှိန်ပြင်းပါက အတွင်းဖက်ကြက်သား မကျက်ဘဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။
8. နီညိုရောင်သန်းအောင်ကြော်ပြီး ဆယ်ထားပါ။ ၁၅-၁၈ မိနစ်ဆိုလျှင် ရပါပြီ။
9. ပြီးလျှင် ကြော်ထားတဲ့ ကြက်သားကို ဆော့စ်နဲ့ရောမွှေပြီးရင် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
[by Myint Oo Tha]
စီချွမ်ငရုတ်နှစ်........၁ဇွန်း (老干妈 lao gan ma တံဆိပ်)
အိစံ ဒီတခေါက် မြန်မာပြည်ပြန်မှ ညီမတယောက် လိုက်ကျွေးလို့ မာလာငါးပေါင်း စားဖူးတာ။ အ၇မ်းစားလို့ ကောင်းတော့ ဒီပြန်ေ၇ာက်တော့ အိမ်မှာလုပ်စားကြည့်တယ်။ ပထမတခါလုပ်စားတုံးကတော့ အ၇မ်းငံသွားတယ်။ ဒီတခါလုပ်စားတော့ ဆိုင်က အိစံစားခဲ့တဲ့ အ၇သာနဲ့ တပုံစံတည်းထွက်လုို့သူငယ်ချင်းတို့ လဲ လုပ်စားကြည့်၇အောင်လို့ ပါ။ လုပ်နည်းက လွယ်ကူမြန်ဆန်ပါတယ်။ မာလာငါး အနှစ်ထုပ်ကိုသုံးထားတာပါ။
၁။ ဆလားဗီးယား ငါး (သို့ ) ကြိုက်နှစ်သက်ရာငါး - ၁ ကောင်
၂။ မာလာငါး အနှစ် (Comment ပုံတွင်ပြထားသောအထုပ်မှ) - ထမင်းစားဇွန်း၂ ဇွန်း (သို့ ) အထုပ် ထဲမှ သုံးပုံတပုံ
၃။ မြေပဲ - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
၄။ လှော်ထားသောနှမ်း - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
၅။ ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်မြိတ် - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း ခွဲ (သို့ ) ကြိုက်နှစ်သက် သလောက်
၆။ ပါးပါးလှီးထားသော တရုတ်နံနံ - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းခွဲ (သို့ ) ကြိုက်နှစ်သက်သလောက်
၇။ ဂျင်း- လက်တဆစ်
၉။ ရေ - ထမင်းစားဇွန်း ၄ ဇွန်း
၁။ ဂျင်းကိုမညက်တညက်ထောင်းပါ။ သန့် စင်ထားသောငါးကို ပန်းကန်တခုထဲထည့်ရ်ျ ဂျင်း အ၇ည်ကို အပေါ်မှညှစ်ချပါ။ ငါးရဲ့ ၂ဖက်လုံးပေါ် ဂျင်းရည် ညှစ်ပါ။ထို့ နောက် ငါးကို ၁၅ မိနစ် (သို့ ) မိနစ် ၂၀ ခန့် ပေါင်းပါ။ ပန်းကန်ထဲတွင် ပေါင်းထားသော ငါးမှ ထွက်လာသောအ၇ည်များကို သွန်ပစ်ပါ။ (ထိုအ၇ည်များတွင် အညှီနံများပါသွားပါလိမ့်မည်။)
၂။ မာလာငါးအနှစ်လုပ်၇န်အတွက် အိုးတခုထဲတွင် ဆီ၊ မာလာငါးအနှစ်၊ ရေ တို့ ကို တည်ပါ။အနှစ်များ ကျက်ပြီး အ၇မ်းပူလာလျှင် မီးဖိုမီးပိတ်ပီး မြေပဲ၊နှမ်း၊တရုတ်နံနံ၊ ကြက်သွန်မြိတ်တို့ ကို ထည့်ရ်ျ နှံ့ အောင်မွှေပါ။
၃။ ထို့ နောက် ပြုလုပ်ထားသော မာလာငါးအနှစ်ကို ပေါင်းထားသော ငါးပေါ်ဆမ်းပါ။
၄။ အလွန်အရသာရှိပြီး ပြုလုပ်ရလွယ်ကူတဲ့ မာလာငါးပေါင်းကို ထမင်းပူပူဖြင့်သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
(ထမင်းစားဇွန်း= 1 tablespoon= 15ml)